Maxaynu ugu baahan nahay Nikotinamide Mononucleotide (NMN)
In kasta oo gabowga aan laga maarmi karin, haddana waxaa jira rajo laga qabo in dib loo noqdo hawsha, mahadsanid Nikotinamide Mononucleotide (NMN). Ku noolaanshaha da 'weyn oo bisil waa riyada qof walba waxaana jira waxyaabo isku dhafan sida NMN oo naga caawiya inaan ku guuleysano riyada.
Waan ogahay inaad u maleyneyso inaad u maleyneyso sida dhismahan uu ula xiriiro gabowga. Hagaag, qoryahaaga hayso maxaa yeelay waxaan ku geynayaa faa'iidooyinka nicotinamide mononucleotide.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) waa hordhac NAD + ah. NAD + waa astaamo muhiim oo astaan ​​u ah unugyada aadanaha. Sida aan u sii socono sannadaha, kiimikadan ayaa hoos u dhacda iyada oo ay ugu wacan tahay dhowr hawlood oo enzymatic ah. Waxa taas ka sii daran, heerka isticmaalka ayaa had iyo jeer si aan toos ahayn ugu habboon yahay heerka soosaarka.
Hal shay oo muhiim ah in la ogaado ayaa ah, in ka duwan daawooyinka gabowga ee gabowga kaa dhigaya astaamaha aan la daweyn karin, Waxyeelooyinka NMN waxaa ku xiga null. Bal ii oggolow inaan waxoogaa iftiimiya ka bixiyo sida NMN u saamayneyso noloshaada.
Waa maxay Nikotinamide Mononucleotide (NMN)
Budada Nikotinamide Mononucleotide (Nmn)1094-61-7) wuxuu ka yimaadaa niacin. Waa badeecad ka timid falcelinta ka dhexeysa nicotinamide ribose iyo koox fosfate ah. Xaruntu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa biosynthesis-ka NAD + (nicotinamide adenine dinucleotide), taas oo aasaasi u ah howlaha unugyada biochemical.
Soo saarista NAD +, budada badan ee loo yaqaan 'Nicotinamide Mononucleotide' waxay u shaqeysaa sidii substrate loogu talagalay nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase, taas oo ah enzyme mas'uul ka ah u beddelashada NAD +.
NMN waxay ka mid tahay ilaha waaweyn ee tamarta unugyada jirka gudahiisa. Maadaama ay tahay horudhaca NAD +, hoos u dhaca hal xarun ayaa si weyn saameyn ugu yeelan doonta midka kale.
Daraasadihii dhowaan la soo saaray, Nicotinamide Mononucleotide waxay xaqiijisay inay asaasi u tahay qaybta daaweynta. Mid ka mid ah waxyaabaha lagu xasuusto waxay ahayd xaqiijinta doorka weyn ee xarunta ee dib ugu noqoshada da'da iyo dib udhaca hannaanka gabowga.
Dhawaan, waxaa jira cilmi baaris rajo leh oo ku saabsan maareynta kansarka nikotinamide mononucleotide.
Waxa Cunnadu ku Keenaan Nikotinamide Mononucleotide (NMN)
Wisepower waxay leedahay awood wax soo saar ballaaran oo ah NMN iyo budada NR,
awoodda wax soo saarka billaha ah ilaa 2,000KG.
Waa maxay Faa'iidooyinka Nikotinamide Mononucleotide (NMN)
Kordhinta Kahortaga Gabowga
Waxaad igu raacsan tahay in da'da duqowda iyo cawdu ay caqli ahaan isku mid yihiin. Si kastaba ha noqotee, farxadda maximkani waa mid gaagaaban marka aad bilowdid inaad yeelato daqiiqado waayeel ah. Markii aan sannadaha sii gudubno, jirkeennu wuxuu isu beddelaa cudurro badan oo cudurro badan leh.
Da'da duqoobay waxay saameyn weyn ku leedahay howlaha mobilada. Tusaale ahaan, heerarka NAD + iyo Nicotinamide Mononucleotide si weyn ayey hoos ugu dhacaan inta lagu gudajiro sannadihii dahabiga ahaa. In kasta oo jidhku wali sameeyo kiimikada, heerka isticmaalka ayaa si aad ah uga sarreeya inta jeer ee soo noqoshada.
Marka laga hadlayo dhaawaca DNA, NAD + wuxuu hawl galaa PARP1, borotiinka dayactira DNA, si loo soo celiyo unugyada ay dhibaatadu saameysey.
Hoos u dhac ku yimid NMN wuxuu saameeyaa heerarka NAD + oo markaa kadib wuxuu horseedaa hoos u dhac ku yimaadda wax soo saarka tamarta ee mitochondria.
Daraasado cilmi baaris ah oo uu sameeyay Dr. Sinclair, oo ku takhasusay cilmiga hidde-wadaha ee Jaamacadda Havard, ayaa xaqiijinaya waxtarka kaabista nikotinamide mononucleotide ee gaabinta gabowga. Aqoonyahanku wuxuu qirayaa in isaga iyo aabihiis ay qaadanayaan kaabis waxayna hubaal tahay inay wanaajineyso xusuusta isla markaana maskaxdooda fiiqeyso.
Daaweynta Sonkorowga II
Hoos u dhaca heerka nicotinamide adenine dinucleotide ayaa kicin kara nooca sonkorowga II.
Maamulka Nicotinamide Mononucleotide waxay si weyn u wanaajin doontaa dulqaad la'aanta gulukooska iyo xasaasiyadda insulin ee bukaanka qaba sonkorowga. Ka sokow, qaar ku takhasusay cilmiga hidde-wadayaasha ayaa ka dhawaajiyay in daaweyntu ay beddeshay muujinta hidda-wadaha taasoo ay ugu wacan tahay cunno dufan badan.
Marka heerarka nicotinamide adenine dinucleotide dhaco, xaalada maskaxeed ayaa ku jirta qatar.
Maareynta NMN waxay wanaajisaa tirada NAD +, sidaa darteed ka ilaalinta maskaxda dhaawac. Si kooban, Nikotinamide Mononucleotide waxay faa'iido u leedahay howlaha neuronal-ka iyo garashada, ay ka mid yihiin, barashada, iyo xusuusta.
Sababtaas awgeed, daaweynta waxaa loo isticmaalaa in lagu maareeyo cudurka Alzheimer, cudurka loo yaqaan 'Parkinson's syndrome', waallida.
Foom waxbarasho oo gaar ah ayaa loogu talagalay kuwa kor ku xusan nicotinamide mononucleotide faa'iidooyinka adoo xaqiijinaya in kabitaanku si hufan ula tacaamulo waxyeelada intracerebral. Markii cilmi-baarayaashu maamuli jireen qaddarka jiirka duugga ah, maaddooyinka ayaa diiwaangeliyay horumar ballaaran oo laga sameeyay soo-saarka intracerebral NAD +. Natiijo ahaan, waxaa jiray hoos u dhac ku yimid ischaemiska maskaxda iyo caabuqa neerfaha.
Dheef-shiid kiimikaad leh
Heerka ugu wanaagsan ee NMN ee jirka ayaa loo tarjumayaa kordhinta NAD +, oo habeysa howlaha dheef-shiid kiimikaadka, hagaajinta DNA, iyo ka jawaab celinta walaaca. Tan iyo markii Nikotinamide Mononucleotide wuxuu si toos ah u saameeyaa dheef-shiid kiimikaadka, yaraanta waxay kicin doontaa dhowr xaaladood oo dheef-shiid kiimikaad ah sida cayilka, sonkorowga, beerka dufanka badan, iyo dyslipidemia.
Arinka ku saabsan dulqaad la'aanta gulukooska, NMN ayaa ku dhaqaaqaya sidii kor loogu qaadi lahaa dheef-shiid kiimikaadka sonkorta.
Cilmi baarista ayaa xaqiijineysa inaad lumin karto ilaa 10% miisaankaaga jirka haddii aad qaadato NMN. Sida Dr. Sinclair u dhigay, saameynta hal daawo oo NMN aadamku ay la mid tahay inay ku socdaan orodka.
Ha ilaawin illaa tan tan qalabka xirmooyinka qurxiyo iyo qalliinka wajiga ee kuu daaya kor u kaca aan la qaadan karin.
Sida saynisyahannadu dhigayaan, waxaan u da ’nahay sidii halbowleyaasheena. Soo-jeedintan, waxaad ku ogaan kartaa in dib-u-noqoshada halbawlayaasha vascular iyo dareemayaasha xididdada dhiiggu ay ka ciyaari doonaan tan khibradda nolosheena.
Waxa inta badan ka soocda carruurnimada iyo da'da waa xoojinta iyo adkeysiga muruqyada. In kasta oo astaamahan oo dhan ay ku fiicnaanayaan layliyada joogtada ah, dareemayaashu waxay ka hortagaan fursadaha isla markaana unugyada muruqyada ayaa daciifa halka socodka dhiigga uu hoos ugu dhacayo nidaamyadan.
Bal ii oggolow inaan sharraxaad ka bixiyo aragtida sayniska. Marka unugyada endothelial-ka aadanaha ay ku dhacaan hoos u dhac ku yimaada borotiinnada Sirtuin1, socodka dhiigga ayaa si aad ah hoos ugu dhici doona. Waa inaad fahamtaa in NMN uu yahay maamulaha ugu muhiimsan ee SIRT1. Sidaa daraadeed, maareynta kabitaankan ayaa dhaqaajin doonta sirtuin-signaling, kaas oo abuuri doona unugyo cusub oo keena oksijiinta iyo nafaqooyinka muruqyada iyo xubnaha kale ee muhiimka ah.
Marka, waa maxay waxkasta oo ku saabsan nicotinamide mononucleotide vs riboside?
Hagaag, labaduba waa horudhaca NAD +.
Marka loo fiirsho qaab dhismeedkooda kiimikada ayaa kuu sheegaya in NMN uu ka weyn yahay unug molikelle ka badan NR. Sidaas darteed, nikotiinamide riboside wuxuu ku sameyn karaa jirka bini aadamka isagoon u baahneyn jebinta dhamaan moodeelka.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira wax yar oo rajo ah markii daraasad dhowaan la sameeyay ay xaqiijisay inuu jiro gaadiid qarsoodi ah oo u oggolaanaya kiimikada inay ka gudubto habka dheef-shiidka. Daraasadihii hore ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada ilaa qaar saynisyahano ah ay ka helayaan borotiinka 'Scl12a8', kaas oo fududeeya u beddelashada NMN iyo nicotinamide adenine dinucleotide.
Isticmaalayaasha badankood waxay helayaan qiimaha nikotinamide mononucleotide inuu waxyar ka sarreeyo kan dhiggiisa riboside.
Cilmi baarista Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
In kasta oo ay jiraan daraasado cilmi-baaris oo fara badan iyo kuwo baaxad leh Dib u eegista NMN tan iyo markii la helay 1963, fadlan ii oggolow inaan taabto mashaaricda aan xusin.
NMN Waxay Taageertaa Dhallinyarnimada
Laga soo bilaabo 2013, Dr. Sinclair wuxuu si firfircoon uga qayb qaatay barashada Nikotinamide Mononucleotide kaabis iyo kaalinteeda sida ka hortagga gabowga. Qoraalkiisa cilmi-baarista, hidda-wadaha wuxuu ku sheegay in daaweyntu ay hagaajisay awoodda muruqyada iyo dheef-shiid kiimikaadka moodooyinka jiirka. Dr. Sinclair wuxuu isbarbar dhigay waxtarka NMN iyo inuu shaqeeyo.
Cilmibaadhista, hiddo-wadaha Harvard ma diiwaan gelin waxyeellooyinka fal-celinta ee NMN.
Doorka difaaca Cardio ee NMN
Daraasad dheeri ah oo NMN 2014 ah, Yamamoto iyo saaxiibbadiis ayaa go'aamiyay in NMN ay leedahay astaamaha difaaca wadnaha. Maaraynta kaabista ayaa wadnaha ka ilaalinaysa dib-u-kicin iyo dhaawaca ischemic.
Laba sano ka dib, De Picciotto iyo asxaabtiisa kale ee ku xeel-dheer hiddo-wadaha waxay ogaadeen in NMN ay kobcin karto shaqeynta vascular.
NMN waxay la dagaallameysaa Neurodegeneration
Sanadkii 2015, Long iyo shaqaalihiisu waxay xuseen in kabista NMN ay daweyn karto cudurka Alzheimer isla markaana ay yarayn karto astaamaha xun. Sannad ka dib, Wang iyo kooxdii saynisyahannada ah waxay soo gabagabeeyeen in daaweyntu ay ka hortageyso ciladaha garashada iyo curyaamidda neerfaha.
Sannadaha soo socda, saynisyahannada cilmi-baarista dheeraadka ah ee NMN waxay u yimaadeen inay taageeraan waxtarka Nicotinamide Mononucleotide ee hagaajinta howlaha garashada.
NMN Waxay Dhiirrigelisaa Ficillo Jirka iyo Jirka ah
Sannadkii 2013, Mills iyo kooxdiisa waxay ogaadeen in nicotinamide mononucleotide (NMN) ay maamuli karto cudurka macaanka nooca II. Seddex sano ka dib, wuxuu cadeeyay in kaabista ay ka hortageyso jir ahaanta iyo difaaca jirka ee jiirkii hore. Isla sanadkaas, Mills wuxuu la shaqeeyay Yoshino iyo Imai si uu u barto sida NMN ay u saameyso xididdada iyo doorka ay ku leedahay diiqadda oksida.
Gawaarida Qarsoon ee NMN
Imai iyo koox cilmiga bayoolajiga ah ayaa helay Slc12a8, kaas oo gacan ka geysanaya in jirka Nikotinamide Mononucleotide laga helo jirka. Hawshu waa mid dhakhso badan isla markaana waxay ugu yaraan saameyn ku yeelan doontaa bioavailability NMN.
Ilaa iyo 2017, Aqoonyahanada ka socda Keio (Tokyo) iyo Jaamacadaha Washington waxay si firfircoon ugu lug lahaayeen tijaabooyinka caafimaad ee NMN ee dadka da'da ah laakiin maadooyinka caafimaadka qaba.
Ujeeddooyinka tijaabooyinkan aadanaha ayaa ah in la dhiso badbaadada nicotinamide mononucleotide iyo in la fahmo sida ku-darka ay u saameyneyso howlaha beta-unugyada. Ka sokow, saynisyahannada cilmi-baarista ayaa doonayey inay hubiyaan haddii ay jiraan Waxyeellooyinka kale ee NMN.
Nikotinamide Mononucleotide (NMN) Qiyaasta
Malaha su’aasha ku soo baxda maskaxdaada waa, "Immisa NMN ayaan qaadan karaa?" Hagaag, aan kuu daayo.
Qiyaasta caadiga ah ee NMN ee aadanaha waa 25mg iyo 300mg maalintii. Dhammaan tijaabooyinka caafimaad ee la heli karo, maaddooyinku waxay qaadan doonaan ugu badnaan 250mg / maalintii.
Dr. Sinclair wuxuu qirtay inuu qaato qiyaastii 750mg oo NMN ah maalintii. Haddii aad qorsheyneyso dib u eegista dheeraadka ah ee khadka tooska ah ee NMN, waxaad ogaan doontaa in isticmaaleyaasha qaarkood ay gaarayaan ilaa 1000mg / maalintii. In kasta oo aysan jirin diiwaanno caan ah oo loo yaqaan 'nicotinamide mononucleotide side effects', waa inaad ku dhejiso qiyaasta ugu hooseysa ee ugu macquulsan.
Miyuu Nikotinamide Mononucleotide (NMN) amaan yahay
Illaa iyo hadda, ma jiraan wax macluumaad ah oo lagu dacweyn karo Nicotinamide Mononucleotide oo aan ammaan ahayn. Laga soo bilaabo diiwaanka la daabacay intii lagu jiray tijaabooyinka bukaan socodka, maado ma aysan diiwaangelin wax saameyn ah oo nikotiinamide mononucleotide ah. Maxaa intaa ka badan oo daraasadaha horudhaca ah ayaa lagu guuleystay iyada oo aan la qorin wax calaamado xun ah.
Dhamaystirka Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Maaddaama nicotinamide mononucleotide uusan helin oggolaansho buuxda oo ay bixiso FDA, ma noqon karto daawo dhakhtar qoro. Si kastaba ha noqotee, waad u qaadan kartaa sidii a kaalmada cuntada.
In kasta oo aad ka heli karto dukaamada dawooyinka maxalliga ah, meesha ugu habboon ee laga iibsado badeecaddu waa khadka tooska ah. Waad iibsan kartaa budada badan ee loo yaqaan 'nicotinamide mononucleotide bulk' si aad u sameyso cilmi baaris ama aad u aado nafaqada dheeriga ah. Si kastaba ha noqotee, hubi inaad wax ka iibsaneysid alaab qeybiye beta-nicotinamide mononucleotide sharciyeysan.
Si loo kordhiyo noolaha NMN, waa inaad doorbidaa kaniiniyadaha laba-luqadeedka ah halkii aad ka isticmaali lahayd kiniiniga afka ah.
Marka loo eego heerarka FDA, qofku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 560mg oo ah Nicotinamide Mononucleotide maalin kasta. Waxa ay tahay inaad ogaato waa in broccoli iyo kaabashka ay diiwaangeliyaan tirada ugu sarreysa ee NMN marka la barbar dhigo cuntooyinka kale iyo miraha.
Tusaale ahaan, broccoli wuxuu ka kooban yahay inta u dhaxeysa 0.25mg iyo 1.12mg kiimikada. Marka, haddii aad rabto inaad ilaaliso xaalad caafimaad oo aad u hoggaansanto shuruudaha FDA, waa inaad isticmaashaa 1500 rodol oo broccoli ah maalintii. Maaddaama sidaas la sameynayo ay tahay wax aan macquul aheyn, waa inaad doorataa inaad ka iibsato kaabista alaab-qeybiye beta-nicotinamide mononucleotide.
Yao, Z., et al. (2017). Nicotinamide Mononucleotide wuxuu joojiyaa firfircoonida JNK si looga hortago Cudurka Alzheimer.
Yoshino, J., et al. (2011). Nicotinamide Mononucleotide, Fure NAD (+) Dhex-dhexaad ah, Wuxuu daaweeyaa Pathophysiology ee Cuntada iyo Sonkorowga-Dareenka Sonkorowga ee Jiirarka. Metabolism Cell.
Yamamoto, T., et al. (2014). Nicotinamide Mononucleotide, oo ah Dhex-dhexaadiyaha NAD + Synthesis, Ka ilaaliya wadnaha Ischemia iyo Reperfusion.
Wang, Y., et al. (2018). NAD + Kordhinta Caadiyan Astaamaha Cudurka Alzheimer iyo Jawaabaha Burburka DNA ee Moodel Mouse cusub oo ay lasocoto Yaraanshaha Dayactirka DNA.
Keisuke, O., et al. (2019). Raad-reebka Nidaamka Dheef-shiid kiimikaad ee NAD ee cilladaha dheef-shiid kiimikaadka. Joornaalka cilmiga biomedical.
1.Maxaan u baahanahay Nikotinamide Mononucleotide (NMN)
2.Waa Maxay Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
3.Waa maxay Cuntooyinka ku jira Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
4.Waa Maxay Faa'iidooyinka Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
6.Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Cilmi baaris
7 Qiyaasta Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
8.Nootinamide Mononucleotide (NMN) Ma Ammaanbaa
9.Nototinamide Mononucleotide (NMN) Kabka